कम मूल्यमा उत्कृष्ट हुन सक्ने एडभेञ्चर बाइक, कति पर्छ मूल्य ? – Khabarhouse
कम मूल्यमा उत्कृष्ट हुन सक्ने एडभेञ्चर बाइक, कति पर्छ मूल्य ?
Khabar house | ३ फाल्गुन २०७६, शनिबार ०५:२३ | Comments
काठमाडौं। युवावर्गलाई लक्षित गर्दै चिनीयाँ मोटरसाइकल कम्पनी मोटरहेडले उत्पादन गरेको २०० सीसी क्षमताको एडभेञ्चर मोटरसाइकल ‘एमएच २००’ नेपाली बजारमा बिक्री वितरण हुँदै आएको छ। एसएल आर टेक्नोस् एण्ड ट्रेडले नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आएको यो मोटरसाइकल खासै चर्चामा नरहेता पनि कम मूल्यमा पाउन सकिने उत्कृष्ट एडभेञ्चर मोटरसाइकल हो ।
कम्पनीले यसमा १९९ सीसी क्षमताको एयरकुल्ड इन्जिन दिएको छ।उक्त इन्जिनले ८५०० आरपीएममा १६ बीएच पावरको साथै, ६५०० आरपीएममा १७ एनएम टर्क उत्पादन गर्ने कम्पनीले दाबी गरेको छ। यसमा ६ स्पीड म्यानुयल गियरबक्स दिइएको छ। ‘अहिले युवाको रोजाईमा एडभेञ्चर मोटरसाइकल पर्ने गरेको छ । हामीले कम मूल्यमा उत्कृष्ट मोटरसाइकल उपलब्ध गराउँदै आएका छौं’, कम्पनीका मार्केटिङ मेनेजर सायमण्ड रसाइलीले भने ।
यो मोटरसाइकलले उत्कृष्ट माइलेज दिने कम्पनीले दाबी गरेको छ । कम्पनीको दाबी अनुसार यसले प्रतिलिटर ४० किलोमिटर माइलेज प्रदान गर्नेछ। यसमा १२ लिटरको इन्धन ट्याङ्की दिइएको छ। यो मोटरसाइकलको अधिकतम गति १२० किलोमिटर प्रति घण्टाका दरले कुद्न सक्ने यो मोटरसाइकल अफरोडको लागि उपयूक्त बनाउन २६० एमएमको ग्राउन्ड क्लियरेन्स दिइएको छ ।
मोडरसाइकलको ब्रेकिङ सिस्टमलाई उत्कृष्ट बनाउन दुबै चक्कामा हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक दिइएको मोटर साइकलमा आरामदायी यात्राको लागि अगाडि इन्भर्टेड र पछाडि मोनोशक, स्पीङ ६० सिमेन आयल डम्पर सस्पेन्सन दिइएको छ । एलइडी हेडलाईट रहेको यस मोटरसाइकलमा ओडोमिटर, टेकोमिटर र स्पीडो मिटर डिजिटल रहेको छ ।
हेर्दा निकै इस्टाइलिस देखिने यो एडभेञ्चर मोटर साइकल मूल्य ३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ मूल्य तोकेर बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । अहिले यो मोटर साइकल किन्ने ग्राहकले न’गद ५ हजार छुट पाउने मार्केटिङ हेड रसाइलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नगदको अलावा एक वर्षको बीमा, एक वर्षको सडक दस्तुर र एउटा हेल्मेट कम्पनीले दिने छ । मेरोअटोवाट साभार